श्रष्टा दाहालको कृति विमोचन::Hamrodamak.com
श्रष्टा दाहालको कृति विमोचन
दमक,२२ मंसिर । साहित्यकार विन्दु दाहाल मुकदर्शकको “आँखामा सपना” छन्द कविता संग्रहको शनिवार यहाँ विमोचन गरिएको छ ।
कविता संग्रहको साहित्यकार पुण्यप्रसाद खरेल, प्रगतिशिल लेखक संघ झापाका अध्यक्ष राजेन्द्र संगौला, हिमशिखर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष धु्रबप्रसाद न्यौपाने, बुद्धिजीबि परिषद झापाका अध्यक्ष लिाला अधिकारीले संयुक्त रुपमा विमोचन गरेका थिए ।
१०९ पृष्ठ लामो पुस्तकमा २४ वटा छन्द कविता समाबेश रहेको लेखक दाहालले बताए । कार्यक्रम साहित्यकला संगम दमकको आयोजनामा भएको हो ।
यसैगरि शनिवारनै दमकमा गजल घर नेपाल प्रदेश समितिले तीन महिला श्रष्टाको सहभागितामा महफिलको पाँचौ श्रृङ्गखलाका रुपमा गजल साँझको आयोजना गरेको छ । स्थानीय एसजी होटलमा संगीतमय गजल साँझ सम्पन्न भएको हो । गजल साँझमा काठमाण्डौकी चन्द्रा चाम्लिङ्ग,झापाकी इन्दिरा कुमाल र हुम्लाकी कुन्साङ्ग लामाले आ–आफना गजलहरु प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।
गजल घर नेपाल दमकका अध्यक्ष बाटोघरे कान्छाको अध्यक्षता तथा अग्रज गजलकार भुपेन्द्र तिम्सीनाको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको सो कार्यक्रमको उद्घाटनमा श्रष्टाहरु विवस वलिभद्र,लोकेन्द्र वन्जरा,उर्लावारी गजल मञ्चका उपाध्यक्ष नयश श्रेष्ठ,श्रष्टा जितेन मुस्कान लगायतले साहित्यमा गजलको महत्वका बारेमा चर्चा गरेका थिए ।
शनि, मंसिर २२, २०७५ मा प्रकाशित
मेची भन्सारमा मुद्दा फछ्र्योटबाट मात्रै ३ करोड बढी राजस्व
काँकरभिट्टा,५ साउन । गत आर्थिक वर्षमा मेची भन्सार कार्यालय काँकरभिट्टाले दर्ता भएका मुद्दाको फछ्र्योटबाट मात्रै ३ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७४। २०७५ बाट सरेर आएका १७ तथा...
धरान ,५ साउन । मिस्टर फेस अफ मारवाडीको दोश्रो संस्करणमा धरानका राहुल अग्रवाल विजेता भएका छन् भने मिस फेस अफ मारवाडीको विजेता काठमाण्डौंकी निशा अग्रवाल भएकी छिन् । शनिबार राधानीमा भएको फाइनलमा आफ्नो उत्कृष्ट प्रतिभा...
विर्तामोड, साउन ५ गते । झापाको मेचीनगरमा आज आइतबार एकजनाको करेन्ट लागेर मृत्यु भएको छ । मुत्यु हुनेमा मेचीनगर–६ का ५५ वर्षीय धनकुमार राई रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रहरी नायब उपरीक्षक महेन्द्रकुमार श्रेष्ठले...
दमक ब. क्याम्पसको प्रमुखमा डा. बुढाथोकी
दमक,५ साउन । यहाँस्थित दमक बहुमुखी क्याम्पसको प्रमुखमा डाक्टर नेत्रबहादुर बुढाथोकी नियुक्त भएका छन् । क्याम्पस सञ्चालक समितिको आज आइतबार बिहान बसेको बैठकले डाक्टर बुढाथोकीलाई क्याम्पस प्रमुखमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको क्याम्पस सञ्चालक समिति...